Ukucacisa iArhente, iArhente yeNyukliya yokwandisa ubuQinisekiso- BGT
I-Tianjin Best Inzululwazi kunye neThekhinoloji Co., Ltd. (I-China BGT) liziko lezorhwebo nezorhwebo elisebenza ngokuvelisa kunye nokuthumela ngaphandle amachiza etekhnoloji ephezulu. I-China BGT yamiselwa ngonyaka ka-2000. Ezona mveliso ziphambili kukucacisa iarhente, enye iarhente ye-nucleating kunye nezongezo zokuphinda zisetyenziswe iiplastiki ezithunyelwe kumazwe amaninzi eMzantsi-mpuma weAsia, kuMbindi Mpuma naseYurophu phantse iminyaka engama-20 zilungile. kunye nomgangatho ozinzileyo.
imeko yethu ibonisa
Ukucacisa iarhente kunokusetyenziselwa ukuphucula ukucacisa kunye nokwandisa ukumelana nobushushu be-polypropylene ngokusebenzisa i-nucleation yepolymer. Oku kukhokelela kukomelela okuphuculweyo kwenxalenye ebunjiweyo kunye nexesha elifutshane lokujikeleza ngexesha lenkqubo yokubumba. Olu hlobo lweemveliso zefomula eyakhiweyo yamkelwe yi-FDA evumelekileyo kusetyenziswa kunxibelelwano lokutya kwimarike zehlabathi.
Ngokusebenzisa i-Arhente yeNyukliya, uninzi lweempawu zemveliso zinokuphuculwa, kubandakanya nokuqina kwezinto, ukuvelisa amandla kuxinzelelo, amandla eempembelelo, imodyuli eguqukayo, ubushushu bokugqwetha ubushushu, uzinzo. Kuyacaca ukuba iyakwazi ukuphucula ukusebenza kweemveliso kunye nokubonakalayo. Kuyinto umgubo emhlophe non-ityhefu kunye non-ivumba.
I-Master Transparent Batch ilungele i-resin yekristale engaphelelanga ye-PP kunye ne-PE njl.njl.inokuphucula ukubonakala kwemveliso kunye nokukhanya komphezulu, amandla eqine, ukuqina, ubushushu obugqwetha ubushushu kunye nozinzo lobungakanani, ukunciphisa umjikelo wokubumba. Isetyenziswa ikakhulu kulungiso lweemveliso zeplastiki zenaliti kunye nokuveliswa kwe-PP, ukuhanjiswa okuphezulu kokukhanya okuphezulu, umzekelo, ukutya, izinto zokupakisha izinto zokuthambisa, isitya sezonyango njl.
Ipholiyesta kunye neNyukliya yeNyukliya
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi eMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma naseYurophu.
Iimveliso ze-BGT ziimveliso zobuchwephesha, ezinenkcazo ephezulu, ezingenatyhefu, iimpawu ezingathandekiyo.
Nanini na xa sinamagcisa aphendulayo kwimibuzo yakho.
Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi Ulwazi lwethu lwamva nje